9 × 10 I-Podcast: Ngaba unengxaki okanye uyabaxa? | Ndisuka mac
Kule meko, #todoApple inombolo ye-podcast ye-10 ijolise ikakhulu ekufumaneni Iingxaki ze-iPhone X. Izolo ebusuku ngokungathandabuzekiyo ye-podcast yayijolise ikakhulu kwiindaba malunga nale flegi entsha ye-Apple eqhubeka nokunika okuninzi ukuba ithethe.
Yintoni ecace kuthi kulo mbandela kukuba uluntu lwase-Apple lwanelisekile yi-iPhone entsha esungulwe ngabafana baseCupertino, kwaye Okwangoku, akukho sango liyavela, nangona asifuni ukuba nalo libe lelalo. Inazo iingxaki zayo zokuqala kwaye kucacile ukuba uninzi lunxulumene nescreen se-OLED kunye nenzwa entsha yokuvula i-iPhone, i-ID yobuso.
Asinakutsho ukuba ukusilela kwale iPhone X kulawula iindaba zenethiwekhi kuba ayinako ukusilela ukwenza njalo, kodwa kuyacaca ukuba imfezeko ayikho kwaye i-iPhone njengayo yonke into kweli lizwe ineentsilelo zayo. Ngayiphi na imeko, kwi-podcast siqaqambisa abo bakhankanyiweyo kwezi ntsuku kumnatha: ingxaki yotshintsho ngequbuliso kumaqondo obushushu kwiscreen, umgca oluhlaza kwiscreen, ukuvulwa okuphunyezwe ngumntwana nge-iPhone kanina njalo njalo.
Qaphela ukuba ungasilandela siphile rhoqo ngokuhlwa kwangoLwesibini, ngqo ukusuka itshaneli yethu kwiYouTube, okanye ulinde iiyure ezimbalwa, ide ifumaneke i-podcast audio nge iTunes, njengesiqhelo rhoqo ngolwesiThathu kusasa. Ukuba unayo nayiphi na ingxaki, ungathandabuzeki okanye ucebisa ngepodcast yethu, unokubeka izimvo kuyo bukhoma ngengxoxo efumaneka kwiYouTube okanye unakho Joyina ishaneli yethu yeTelegram, apho unako nxibelelana noluntu olukhulu lwabalandeli beendaba ze-iPhone kwaye ndivela eMac.
Ngayiphi na imeko, into ebalulekileyo kukuba galela ingqolowa yakho yesanti kule ndawo yomsebenzisi Iyaqhubeka ukukhula imihla ngemihla kwaye oko kuya kukunceda ukuba ube nexesha elihle lokuthetha ngento esiyithandayo, kunye nokufunda izinto ezintsha okanye ukunceda abo bafika kwihlabathi elitsha le-Apple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » 9 × 10 I-Podcast: Ngaba unengxaki okanye uyabaxa?
I-USB-C kwikhebula lesibane sombane kwi-iPhone yakho nakwiMacBook